Mursal oo laga dalbaday inuu Is-casilo | KEYDMEDIA ONLINE
Mursal oo laga dalbaday inuu Is-casilo
Mursal ayaa lagu eedeeyay inuu jebiyay sharciga dalka iyo xeer hoosaadka Gollaha Shacabka, isagoo si cad ula saftay dhinaca Farmaajo ee muod-korarsiga u xusul-duubaya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Musharax C/naasir Cabdulle ayaa ugu baaqay gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Mursal inuu xilka iska-casilo kadib markii uu si sharci darro ah Xildhibaanno gaaraya 15 uu kulamada uga joojiyay.
Dr C/naasir ayaa ku eedeeyay Mursal inuu la saftay Madaxda uu waqtiga ka dhacay ee jooga Villa Somalia halkii uu sharciga ka ilaalin lahaa, isagoo sidoo kale u horseeday dalka fowdo iyo qalalaase siyaasadeed.
Musharaxa ayaa wax laga xumaado iyo nasiib darro ku tilmaamay wixii ka dhacay Baarlamaanka Sabtidii lasoo dhaafay, oo kulanka fowdo kusoo idlaaday kadib markii Xildhibaanada mucaaradka ay diideen in mooshin mudo-kordhin ah loo hoos geliyo.
Waxay ahayd dhacdo mugdi gelinaysa dimuqraadiyadda curdunka ah ee Soomaaliya ka hana-qaaday, iyadoo xaaladda uu Farmaajo dalka u horseedayo ay tahay nidaam caburin iyo kaligii talis-nimo ku dhisan, oo awoodda Ciidanka la adeegsanayo, sida uu sheegay Dr C/naasir.
Wuxuu sheegay hadii ay Musharixiinta yihiin ay ka digayaan in hay'adda fulinta [Xukuumadda] ay faragelin ku sameyso Baarlamaanka, isagoo ka digay dhibaatada ka imaan karta in askar dhar-cad ah la geliyay xarunta ay ku shirayaan Xildhibaanada kadibna awood loo adeegsado in lagu aamusiyo kuwa mucaaradka ah.
Mursal ayaa ku fashilmay hogaanka Gollaha Shacabka, isagoo intii uu joogay kala qeybiyay labada Golle ee Baarlamaanka oo wadashaqeyn ka dhaxaynin, waxaana lagu eedeeyay inuu la saftay Farmaajo oo ku shaqeeyo danihiisa gaar ah.